Andorra (; Dhawaaqa: i/dɔːrə/) waa wadan yar oo ku yaalo Koonfurta galbeed ee Yurub. Wadankani wuxuu xuduud la leedahay wadamada Isbayn iyo Faransiiska. Andorra waa wadanka lixaad oo uugu yar Yurub.
Waxaa madax u ah boqorka katalooniya iyo madaxweynaha faransiiska labadaba.
Andorra​—The Pearl of the Pyrenees
↑  Archived May 10, 2011 // Wayback Machine
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Andorra&oldid=224176"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 18 Nofeembar 2021, marka ee eheed 13:29.